यस छन्, जाडो मौसममा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु - ज्ञानविज्ञान
यस छन्, जाडो मौसममा मुटुका बिरामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
१. सुगर नियन्त्रणमै राखौँ :
मुटुरोग र सुगरबीच अन्योन्यास्रित सम्वन्ध हुन्छ । मुटुरोगीलाई जस्तै सुगरका बिरामीलाई पनि हृदयघातको सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।
गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा धेरै खान रुची हुने र कसैकसैले यसैको फाइदा उठाउदै अनियन्त्रित रुपमा भोजन गर्ने प्रचलनले सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढ्छ । यसको असर मुटुमै गई ठोक्किन्छ । त्यसैले मुटुरोगीहरु सुगरको पनि परीक्षण गरि राख्नुपर्छ ।
२. चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग त्यागौँ :
कतिपयले जाडो छल्ने बहानामा चिसो मौसममा झनै बढी चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । तर त्यो सर्बथा गलत हो ।
किनकी त्यसै खुम्चिएको रक्तनलीहरुलाई यसको सेवनले थप साँघुरो बनाउछ जसले गर्दा हृदयघातको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले मुटुरोगबाट बच्नका लागि सकेसम्म कहिल्यै चुरोट तथा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग नगरेको राम्रो ।
३. मदिराको सेवनमा नियन्त्रण आवश्यक :
कतिपयले जाडो मौसममा शरीर तताउन भन्दै अत्यधिक मदिराको सेवन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो पनि स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ ।
अत्यधिक मदिराले कोलेष्ट्रेरोल बढ्न जान्छ । अझ अधिकांशले मदिरासंगै अत्यधिक मासु तथा चिल्लो पदार्थको सेवन गर्ने गर्दछन यसले थप असर पार्दछ ।
४. औषधि बन्द नगर्नुस :
कतिपयले प्रेसर र सुगरका औषधिहरु अनियमित रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । तर यस्तो गर्नु आफैलाई खतरामा धकेल्नु हो ।
मुटु, सुगर तथा दमका विरामीका लागि जाडोको समय प्रतिकुल नै हुने भएकोले यस्तो बेलामा औषधिहरुको नियमीत सेवन गरौँ ।
५. विहानको चिसोमा मर्निङ वाक नगरौँ :
हिजो आज विहानको मौसम अत्यधिक चिसो हुने भएकोले मर्निङ वाकमा सकभर कोही पनि ननिस्किएको राम्रो । अझ मुटुका विरामी त चिसोमा निस्कनै हुँदैन ।
किनकी चिसोको कारणले मुटुका रक्तनलीहरु खुम्चिन गई रगत प्रवाहमा असर पर्छ । जसले गर्दा हृदयघात हुने सम्भावना हुन्छ ।
६. उच्चरक्तचापलाई निगरानी गरौँ :
उच्चरक्तचापका विरामीहरु चिसो मौसममा थप सर्तक हुनुपर्छ । चिसो मौसममा स्वभावैले रक्तचाप बढ्ने हुनाले हृदयघातको खतरा पनि बढ्छ ।
तसर्थ यस्ता विरामीहरुले नियमित रुपमा रक्तचाप परीक्षण गरी रक्तचाप नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । यदि रक्तचाप बढेको खण्डमा तत्काल चिकित्सकको परामर्स लिइ औषधिद्धारा नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
७. कोलेष्ट्रेरोल नियन्त्रण गरौँ :
उच्च कोलेष्ट्रेरोल पनि हृदयघात गराउने प्रमुख कारक हो । जाडोको बेलामा रगतमा कोलेस्ट्रेरोलको मात्रा बढी देखिने हुँनाले यसलाई घटाउने वा नियन्त्रणको आवश्यकता अनिवार्य छ ।
त्यसका लागि फाइबरयुक्त खानाको साथै शारीरिक व्यायममा ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थको सहयोगमा
Topics #जाडो मौसम #मुटुका बिरामी
Don't Miss it महिलाहरुले स्वास्थ्य शरीरका लागि अपनाउनुस यी टिप्स
Up Next सिन्दुर र गरगहनाले महिलाको स्वास्थ्यमा पर्ने असर, जानी राखौँ
मानिसको शरीरमा किन उम्रिन्छ काँडा ? यस्तो छ कारण – जान्नुहोस्
जाडोको बेला होस या तर्सेको बेला हाम्रो शरीरको छालामा ससाना विमिरा देखिन्छ जसलाई हामीले काँडा उठेको भन्छौ । यस्तो काँडा…
माछामासु छाड्दै हुनुहुन्छ ? पूर्ण शाकाहारी हुनु पनि हुनसक्छ घातक !
अहिले चिकित्सककहाँ पुग्नुभयो भने, तपाईंको मेनुबाट थुप्रैथरी खानेकुरा कटौती हुनेछ । त्यसमा खसीको मासु, बोइलर कुखुरा पनि हुनसक्छ । चिल्लो,…
पाचन प्रक्रियालाई यसरि बनाउनुहोस बलियो
जीवनशैलीले पाचन प्रक्रियामा भूमिका खेल्छ । खाना, पानीको मात्रा, फाइबरयुक्त खाना, नियमित व्यायामजस्ता कुराले पाचन प्रणलीमा सीधा प्रभाव पार्छ ।…
पानीसँग यी कुराहरू मिसाएर पिउदा पेट ठीक हुन्छ
आधी आधी चम्चा ठूलो अलैंचीको धूलो र मिश्री मिसाएर बिहानबेलुका पानीसंग खाने गर्नुस् । दिनदिनै दुई चम्चा कागतीको रसमा तीन…
यसरी सेवन गरौं जाडोमा तुलसीलाई, रुँघा-ज्वरोमा लाभदायक
तुलसी जाडो याममा निकै उपयोगी हुन्छ । किनभने जाडोमा रुँघा, ज्वरो, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, गलाको समस्या, फोक्सोको समस्या हुनेगर्छ । यस्तो…
नियमले पानी पिउदा स्वास्थ्यलाई फाइदै फाइदा
नुहाउनुभन्दा अघि एक गिलास पानी पिउनुस् । रक्तचाप स्थिर रहन्छ । खाना खानुभन्दा आधी घन्टाअघि एक गिलास पानी पिउनुस् ।…
डायबेटिज पीडितले यसो गरौँ, जानकारीका लागि सक्दाे सेयर गर्नुहाेला
डायबेटिज पीडितमध्ये अधिकांश टाइप–टू डायबेटिजबाट ग्रस्त हुन्छन् । यस्तो डायबेटिज भएका व्यक्तिको शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन त हुन्छ, तर यो पर्याप्त…
तीते करेलाका फाइदा र बेफाइदा, यस्ता छन्
यस्ता समस्या भएका व्यक्तिहरूले तितेकरेलाको सेवन गर्नु हुँदैन : पायल्स : पायल्सको समस्या छ भने पनि तितेकरेलाबाट टाढै रहनुस् ।…
घरेलु उपचार (31)